Dowlad Afrikaan ah oo u hiilineysa Muslimiin la dhibaateeyay |
Dalka ugu yar galbeedka qaaradda Afrika ee Gambia ayaa maxkamadda ugu sareysa Qaramada Midoobay u gudbiyay dacwad ka dhan ah xasuuqa loo geystay Muslimiinta Rohingya.
Dacwadan ayaa waxaa loo gudbiyay maxkamadda cadaaladda aduunka ee ICJ, taas oo inta badan dhageysata dacwadaha u dhaxeeya dalalka caalamka.
Sanadkii la soo dhaafay, Qaramada Midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha loo geystay Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya ee dalka Mnyamar, waxaana ay ku talisay in saraakiisha ugu sareysa milateriga ee dalkaas oo lagu eedeeyaya dhibaatada maxkamad lasoo taago.
Hasayeeshee eedeemahaas ayaa waxaa beeniyay dowladda Mnyamar oo sheegtay in aysan wax dembi geysanin.
Kumanaan dadka Rohingya ayaa la dilay sanadkii la soo dhaafay, halka 700,000 ay u qaxeen dalka dersika la ah ee Bangladesh, kuwaas oo ka cararay hawlgalka milateri ee dowladda dalkaas ay ka waday gobolka ay dadkaas degan yihiin.
Xafiiska dacwad oogaha maxkamadda cadaaladda adduunka oo ah mid baaritaan ku sameysa dembiyada dagaal ee dunida ka dhaca ayaa furay gal dacwdeed ka dhan ah dalka Mnyanar oo lagu eedeeyay in ay dhibaateyeen Muslimiinta Rohingya, hasayeeshee dalkaas oo aan horay u saxiixin axdi qraameedkii lagu asaasay maxkamadda ayaanan ilaa iyo iminka wax maxkamad lasoo tagain dadkii ka dambeeyay dhibaatada Rohingya.
Maxay tahay dacwadda Gambia?
Dowladda Gambia ayaa dacwaddan gudbisay maalin kahor. Dalkan oo ay u badan yihiin dadka heysta diinta Islaamka ayaa tagaeero ka heysta 57 dal ee xubinta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ee OIC iyo sidoo kale qareeno caalami ah.
Gambia iyo Mnyamar ayaa sidoo kale saxiixay axdi Qarameedkii 1948 ee ka hortagga xasuuqaa, kaas oo dhigayay in lala xisaabtamo kuwa geysta dembiyada.
Gambia ayaa markii ay gudbisay dacwadda, waxaa kale oo ay dalbatay in maxkamadda ay dalka Mnyamar ku qasabto in ay joojiso waxa ay ugu yeertay xasuuqa ay ku heyso dadka Rohingya.
Abubacarr M Tambadou, xeer ilaaliyaha dalka Gambia ahna wasiirka cadaaladda ayaa hogaaminaya tallaabadan ay qaaday Gowladda Gambia
Ninkan oo aqoon u leh sharciyada caalamiga aya waxaa uu horay uga soo shaqeeyay maxkamaddii bareesay dhibaatooyinka ka dhacay dalka Rwanda sanadkii 1994.
Waxaa uu BBC-da u sheegay in marka uu arkay dhibaatooyinka dadkaas heysta oo ay ka mid yihiin dilka, kufsiga iyo jirdilka lagu hayo uu ku dhiiraday in uu qaado tallaabadan.
Waxaa kale oo uu sheegay in dadkaas uu ku booqday dalka Bangladesh.
Hawlgalkii ay milateriga Myanmar sanadkii 2017 ka fuliyeen gobolka Rakhine ayaa waxaa ku dhintay kumannaan Rohingya ah, halka in ka badan 700,000 oo qof ay u barakaceen dalka deriska la ah ee Bangladesh.
Guddiga Qaramada Midoobay ay u saartay xasaradda Myanmar ayaa bishii August 2018 sheegay in milateriga dalkaasi uu ku kacay xadgudubyo aan loo qiil-dayi karin, ayna ka mid yihiin dilal aan kala sooc lahayn, kufsi iyo tuulooyin dhan oo dab la qabad siiyay.
Myanmar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warbixinta. Waxa ay mar kasta ku adkeysataa in hawlgalka lagu beegsaday dagaalyahanno mintidiin ah.
Sanadkii hore dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada adduunka – oo inta badan baarta eedeymaha dembiyada dagaal – ayaa gal dacwadeed hordhac ah u furtay tacaddiyada loo geystay qowmiyadda Rohingya ee Myanmar.
Balse maadaama Myanmar aanay kamid ahayn dalalka saxiixay heshiiska lagu dhisay maxkamadda, ayaa waxaa adkaaday sharci ahaanta kiiska.